सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार मनोनयन गरेको विषय शेखर समूहका लागि भने 'सरप्राइज' भएको छ - सिधा दृष्टी
सिधा दृष्टी बिहिबार, चैत्र १०, २०७८ | March 24, 2022
काठमाडौं- बुधबार नेपाली कांग्रेसका दुई भातृसंस्था नेविसंघ र तरुण दल अध्यक्षमा क्रमशः डुजाङ शेर्पा र विद्वान गुरुङ मनोनित भए। सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार मनोनयन गरेको विषय शेखर समूहका लागि भने 'सरप्राइज' भएको छ।
सभापति देउवाले दुई भातृसंस्थामा अध्यक्ष मनोनयन गरेको पत्र तयार भइरहँदा शेखर समूह भने आन्तरिक छलफलका लागि बैठक बसिरहेको थियो। उक्त समूहको एजेन्डामा पनि भातृ संस्थामा गर्नुपर्ने मनोनयनका विषय परेको थियो।
समूहको बैठकमा भातृसंस्थाका तदर्थ समिति गठनमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालिरहँदा दुई भातृसंस्थामा भने अध्यक्ष
मनोनित भइसकेका थिए।
समूहका नेता डा. शेखरले बुधवार बिहान मात्रै देउवासँग टेलिफोन गरेर भातृसंस्थाको तदर्थ समिति गठनका बारेमा छलफल गरेका थिए। देउवासँगको छलफलपछि शेखरले आफ्नो समूहको बैठक डाकेका थिए। शेखरले देउवासँगको छलफलको पनि बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
'सभापतिजी सहमतिमा आउन खोज्नु भएन। धेरैपछि आज बिहान टेलिफोन वार्ता भयो। सल्लाह गर्न बोलाउँछु भन्नू भएको छ। बोलाउनुहुन्छ होला,' बैठकमा शेखरले भनेका थिए। तर बैठक सकिएलगत्तै भातृसंस्थाको नेतृत्व मनोनयन गरिसकिएको विज्ञप्ति कांग्रेस कार्यालयले जारी गरेको थियो। मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति सञ्चारकर्मीहरूका मेलमा पुग्यो।
बैठककै बीचमा देउवाले शेखर कोइराला र गगन थापालाई फोन गर्नु भएको थियो। छलफल गरेरै भातृसंस्थाका तदर्थ समिति गठन गर्ने बताउनु भएको थियो,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
त्यो बेलासम्म समूहका नेताहरू डा. शेखर कोइराला, डा चन्द्र भण्डारी, डा मीनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी बैठकस्थलबाट बाहिरिइसकेका थिए। अन्य नेताहरू पनि हिँड्ने तरखरमा थिए।
हिँड्ने तरखर गरिरहेका महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्रीद्वय ज्ञीवन परियार र बद्री पाण्डे र केन्द्रीय सदस्यहरू विज्ञप्ति देखेर सरप्राइज भए। विज्ञप्ति जारी भएपछि उपसभापति गुरूङ, महामन्त्री थापा, सहमहामन्त्री पाण्डे, परियार र केसद्वय अजयबाबु शिवाकोटी र प्रतिमा गौतम छलफलमा जुटेका थिए।
'बैठककै बीचमा देउवाले शेखर कोइराला र गगन थापालाई फोन गर्नु भएको थियो। छलफल गरेरै भातृसंस्थाका तदर्थ समिति गठन गर्ने बताउनु भएको थियो,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'हामीलाई 'इंगेज' गर्ने प्रयास गरेर एक्कासी निर्णय लिनुभयो। उहाँको एकलौटी निर्णयले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ।'
देउवाको एकल निर्णयले अपनत्व फिल नभएको र विवाद सिर्जना गर्न सक्ने शेखर समूहका अर्का एक नेताले बताए। 'सबैलाई समेटेर लैजान नसकेको हाम्रो निष्कर्ष छ,' उनले भने, 'पार्टीभित्र कायम भएको एकता खलबल्याउने प्रयास सभापतिजीकै निर्णयले गरेको छ। मत नहाल्नेहरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति जारी रहे दुर्घटना निम्ताउन सक्छ।'
भातृ संस्थाको तदर्थ समिति, सरकार सञ्चालन, संसदीय बोर्ड गठनलगायतका सन्दर्भमा आफूलाई मत नहाल्नेहरूलाई देउवाले किनारा लगाउन खोजेको शेखर समूहको ठहर छ।
देउवाको कार्यशैलीमाथि गरमागर्मी बहस भएको बैठकमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको टिकट वितरण गर्दा एकलौटी भए विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विचारसमेत आएको एक नेताले बताए।